Shahaadooyinka Ganacsiga ee Falanqaynta Ganacsi ee Bilowga & Xirfadlaha | ITS
Shahaadooyinka Ganacsiga Warshadaha
Qorshaynta Mashruuca iyo Maareynta Maareynta
Kobcinta iyo Kulanka Shuruudaha Ganacsiga Shuruudaha
Koorsada Qiimaynta Xalka
Siyaabo Doorasho ah oo Loogu Noqonayo Falanqaynta Ganacsiga
2. Hel Shahaadada Ganacsi Lacageed
3. Xirfadaha Warshadaha
Xagee laga helaa Kormeerka Ganacsiga Ganacsiga?
Falanqeeyayaasha ganacsiga waxay aqoonsadaan arimaha, burburiyaan baahida, la tacaalida koox mashruuc ah, iyo ogaanshaha isbeddelada la xiriira ganacsiga. Waxay kor u qaadaan oo dejiyaan nidaamka ganacsiga, tusaale ahaan, dhalid, faa'iidada wareega iyo kuwa kale. Xalalka ay bixiyaan waa kuwo ku saleysan innovation. Xiisaha u leh falanqeeyayaasha ayaa ku jira jahawareerka dhammaan qaybaha.
Shahaadooyinka waxay ubaahantahay awoodo aad ku baran karto koorasyada falanqaynta ganacsiga. Shahaadada iyo khabiirada koorsooyinka ee ganacsiyada xiriirka la leh ayaa kugu haboon inaad ku filaato bandhigga shaqeynta. Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada shahaadooyinka waxay bixiyaan tababaro gaar ah. Koorsadani waxay tilmaamaysaa waxyaabahan xariifka ah ee habka falanqaynta iyo waxay siisaa hawlo waxtar leh.
Koorasku waa mid muhiim u ah khabiirada iyo khabiirada u baahan in laga hadlo xayaysiinta shaqada iyo weliba kuwa tooska ah ee dugsiga.
Koorsada falanqaynta ganacsiga waxaa loogu talagalay dadka xiisaha leh ee ka caawinaya macaamiisha inay kulmaan yoolalka ganacsiga. Kulliyadaha iyo jaamacadaha waxay bixiyaan koorsooyinka xafiisyada, tusaale ahaan, horumarinta aqoonta iyo tababarka. Muddada koorsada shahaadiga ah waa mid gaaban oo ka mid ah hal sano oo aad u baahan tahay inaad ka fiirsato 4 si koorsooyinka 10 ay la wadaagaan xulashooyinka.
Fikradaha barashada koorasyada ganacsiga waxaa ka mid ah:
Qaybaha falanqaynta ganacsiga
Fahmida waxyaabaha loo baahan yahay ururada
Agaasimuhu waxa uu sharxayaa falanqaynta ganacsiga
Hagaajinta arimaha mashruuca
Qiimeynta iyo qabashada arrimaha la xariira ganacsiga
Koorsooyinka caadiga ah
Koorsooyinka Aasaaska Ganacsiga
Farsamooyinka falanqaynta ganacsiga lagama maarmaanka ah waxaad ka heleysaa qaybo ka mid ah falanqeeyayaasha iyo ka go'naanta ay u leeyihiin ururka. Waa dib-u-eegis toos ah oo lagu kala qaybinayo shaqada a falanqaynta ganacsiga. Qaar ka mid ah hawlahaaga ayaa isticmaalaya istaraatiijiyado aasaasi ah iyo nidaamyo si ay u daryeeshaan arrimaha ganacsiga, qiimeeynta xalka xal, iyo hubinta inay timaado.
In qorshaynta mashruuca iyo maamulka, waxaad ku qaadataa nidaamyada aasaasiga ah iyo farsamooyinka wax looga qabanayo mashruuc si macquul ah. Waxaad sidoo kale la socotaa baadhitaano xaddidan. Qodobbada koorsada waa:
Wax ka qabashada rabitaanka oo dhan
Go'aaminta qiimaha, hantida asaasiga ah iyo shahaadada mashruuca oo dhan
Baahida iyo fulinta mashruuca
Koorsada Kuleejinta Shuruudaha
Koorsadani waxay muujinaysaa habraaca hogaaminaya dib u eegista, shirarka, ururinta iyo shuruudaha diiwaangelinta, tusaale ahaan, ururinta xarumaha, fikradaha, iyo kuwa kale. Waxaad kordhisaa ka qaybqaadashada gacanta ee degdegga ah iyada oo sameysma shuruudaha ganacsiga.
Koorsada, waxaad ogaaneysaa sida loo jebiyo macluumaadka iyo raadinta xalka si wax looga qabto arimaha lamaanaha. Qalabka aan dhamaadka lahayn ee xidhmo xabbad ah, waxaad tijaabisaa oo qiimeysaa natiijooyinka.
Waqtiga ugu dambeeya, waxaad ogaataa sida loo falanqeynayo diyaarinta. Horumarintaan waxaa ka mid ah baaritaan iyo ansixinta xalalka lagu xaqiijinayo tayada iyo natiijada baaxada leh. Xalalka waa inay buuxiyaan shuruudaha macmiilka iyo inay fuliyaan natiijooyinka la rabo. Waxaad ka shaqeyn doontaa sameynta imtixaan si loo xaqiijiyo xalalka la soo jeediyey.
Siyaabo kala duwan ayaa kuu imaan kara xirfad-yaqaan ganacsi. Miisaankaagu wuu ka fiicnaan karaa haddii IT-daada iyo ganacsiguba aad u sarreeyaan. Qodob aan la fahmi karin oo suuqa ah ayaa laguu sii dhigayaa. Marka laga soo tago barashada waxaad tilmaantan ka dhigan kartaa inay kaa caawin karto inaad ku noqoto falanqeeye ganacsi:
Horumarinta liiska ayaa leh macluumaad macdanta iyo falanqaynta, iyo awoodda xiriirka. Falanqaynta falanqaynta ganacsiga iyo ku biirida macluumaadka horumarinta software wuxuu kaa caawinayaa inaad ka qaadato dakhliga sare ee shaqada falanqaynta ganacsiga.
Ku qor barnaamijka shahaadada falanqeynta ganacsiga ee ku saabsan fursadda aad haysato shahaadada afar sano ee aagagga, tusaale ahaan, HR, qaab-dhismeedka xogta, xisaabinta, iyo ganacsiga. Waxaad ka qaadi doontaa awoodaha muhiimka ah si aad u qaadato xirfad ahaan falanqeeye ganacsi.
Isbeddelka xirfadaha ka dib marka aad wax badan ka qayb qaadato iyo warshadaha ayaa keeni kara dhiirigelintaada ku jirta bandhigga shaqaaleynta. Falanqaynta falanqaynta ganacsiga si aad u hesho waxqabad iyo shahaadooyinkaaga ayaa soo bixi doona. Kama dhiirrigelin kartid ganacsiyada, intaa in ka badanna ku guuleysto.
Hubka koorsada caadiga ah ee ganacsadaha ganacsigu wuxuu fahamsan yahay macluumaadka asaasiga ah iyo awoodaha si kor loogu qaado foomamka ganacsiga. Koorasku wuxuu kuu sahlayaa inaad jebisid oo aad qorsheysatid jimicsiyada ganacsiga, inaad sameyso shuruudo cad, kala-gooyo kala-geddisan, si sax ah u sameyso dukumeentiyo, iyo kormeerka shuruudaha ayadoo la raacayo nolosha mashruuca.
Kulliyadaha badankood waxay bixiyaan koorso 4-sano ah oo loogu talagalay barnaamijyada falanqaynta ganacsiga ee qalin-jabinta iyo qalin-jabinta. Qaar ka mid ah ururada IT-da waxay bixiyaan koorsooyin isku mid ah. Xalinta Teknolojiyada Cusub waa xaalad khaas ah tan iyo markii aan ugu dambeyn usoo jeedino koorsooyinka Oracle Shahaadada falanqaynta cusub iyo falanqaynta khibrad leh.
Ganacsiyo badan ayaa isku xiraya falanqeeyayaasha si ay uga caawiso inay la qabsadaan xaaladda sii socota. Waqtiga xaadirkan, falanqaynta ganacsiga waa qayb ka mid ah koorsooyinka ganacsiga ee kulliyadaha iyo aasaasaha kale ee tababarka ee caalamka. Waxaad kooras ka qaadan kartaa ITS sidoo kale.